Ihe ị ga-ahụ na ndịda France | Njem akụkọ
Mariela Carril | 05/04/2022 17:00 | Francia, Ihe ị ga-ahụ
Kaadị ozi kacha mma bụ nke South nke France. Nke a akụkụ nke mba na-eweta ọnụ ihe niile onye nwere ike na-atụ anya si a French ezumike na osimiri, boutique ụlọ ahịa, gourmet nri… ihu ọma nkọwa nke ebe dị ka Nice, Cannes ma ọ bụ Saint-Tropez.
Ma ọ bụghị naanị ihe dị n'ebe ndịda nke France, akụkụ a bụkwa ebe obibi nke Provence ya na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme, mkpọmkpọ ebe ndị Rom ma ọ bụ ubi lavender ma ọ bụ ọbụna Marseille ma eleghị anya, na-atụgharị na ndịda ọdịda anyanwụ na-amasị gị echiche ileta Biarritz ma ọ bụ. mpaghara mara mma nke Languedoc-Rousillon. Taa, Ihe ị ga-ahụ na ndịda France
1 Ndịda France
2 Ihe ị ga-aga na ndịda France
Yabụ, anyị nwere ike ikwu na ndịda France enwere Nice, Cannes, Monaco, Saint Tropez, Arles, Avignon, Aix-en-Provence, Marseilles, Biarritz, obodo Carcassone., na ndepụta UNESCO, ma ọ dịkwa Toulouse. M pụtara, ntakịrị ihe niile!
Ịgagharị akụkụ France a dị mfe n'ihi na e nwere ezigbo netwọk okporo ụzọ na ụgbọ oloko, ihu igwe na-adị mma mgbe niile, ụbọchị okpomọkụ na-ekpo ọkụ ma dị ogologo ma nwee ihu igwe dị mma ọbụna na September na October, ụsọ oké osimiri dị oke mma, e nwere ihe ncheta ndị Rom na ọdịdị ala dị ịtụnanya.
Ma mgbe ị na-eme atụmatụ nleta na ndịda France nke ọma, a ghaghị ikwu na ọ kacha mma izere njedebe nke November na Jenụwarị n'ihi na, n'agbanyeghị na mbara igwe na-acha anụnụ anụnụ na mgbede, okpomọkụ na-adaba na ifufe na-eme ka ọ ghara ịdị ukwuu. nke ọma. Chee echiche banyere nkezi okpomọkụ n'etiti 14 na 15 ºC.
N'ihi ya, oge dị mma nke afọ iji gaa na ndịda France bụ Eprel na Mee na Septemba na Ọktọba. Site na Mee ruo Septemba, a na-ekwe nkwa ihu igwe dị mma. June na-atọkwa ụtọ karị, ee, Julaị na Ọgọst bụ ọnwa ka ọkụ. Mmiri ozuzo? N'August, enwere ike ịnwe mmiri mmiri ma ọ bụ mmiri ozuzo na-adịru ụbọchị ole na ole.
Ihe ị ga-aga na ndịda France
La Usọ mmiri Ọ na-ekpuchi ngalaba French nke Var na Alpes-Maritimes yabụ ebe a bụ Nice, Cannes, Saint Tropez, Frejus, Menton, Antibes na Villefranche-sur-Mer. Mma Ọ bụ obodo mara mma nke nwere ụzọ sara mbara, nke nwere n'ọnụ mmiri ya na n'ụsọ oké osimiri nke ájá ọla edo. Kwa afọ 3 nde ndị njem na-abịa na-ekpori ndụ ma eleghị anya naanị Paris bụ asọmpi.
Na Nice bụ The English Pier, Matisse Museum, Katidral Russia na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na-amasị gị jazz, e nwere ya Jazz ememme malitere site na 40s, na-emekarị na Julaị. Ihe omume ọzọ dị mkpa bụ carnival, otu n'ime ndị kasị ochie na ndị kasị ibu n'ụwa, na ọnwa nke February na na Mardi Gras na ihe niile. Maka ekeresimesi, ahịa Le Villeage de Noel. Mma.
Ebe ọzọ na-ewu ewu ma dị oke egwu bụ Saint-Tropez. Ndị na-ese ihe, ụdị na ndị ọgaranya si n'akụkụ ụwa niile na-ezukọ ebe a. Nke Tahiti na Pampelonne osimiri so na ndị kacha mma n'ụwa na ọdụ ụgbọ mmiri ya jupụtara ụgbọ mmiri na njem ụgbọ mmiri nke ndị kasị baa ọgaranya n'ụwa. Obodo ahụ dị n'obere ọnụ mmiri, ihe dị ka kilomita 50 site na obodo Toulon na 70 km site na Cannes.
Na-ekwu maka Cannes Ọ bụ oche onye ama ama ihe nkiri Ememme ruo ihe karịrị iri afọ asaa, ma ọ na-enye ndị ọzọ. O nwere ọmarịcha etiti boulevard a na-akpọ Le Croisette, ọtụtụ ụlọ ahịa, ezigbo osimiri na ebe mara mma dị nso ị ga-anọ ụbọchị dị ka Antibes ma ọ bụ Mandelieu La Napoule.
Agbanyeghị, ịhapụ Côte d'Azur nwekwara French provence nwere obodo na obodo ya mara mma dịka Arles ma ọ bụ Aix ma ọ bụ Saint Remy. Setan RemyDịka ọmụmaatụ, bụ obere obodo dị n'etiti mpaghara ahụ nke nwere ebe a na-ahụ maka labyrinthine na nnukwu ahịa na-agagharị n'ụtụtụ Sọnde. A mụrụ Nostradamus ebe a na narị afọ nke XNUMX na ebe a kwa onye na-ese ihe bụ Vincent van Gogh na-agwọ ọrịa uche ya. Ọ bụrụ na ịga, kpachara anya maka ifufe siri ike n'etiti Mee na Septemba. Ndị Mistral nwere ike ime ka nleta ahụ sie ike.
Aix O nwere nnukwu katidral ochie mara mma, ogige mara mma, ọtụtụ puku isi iyi na nnukwu osisi nwere oghere nke na-esote ahịrị obodo ochie ahụ, na-ekewa obodo ahụ ụzọ abụọ. Aix bụ a ochie mahadum obodo na a na-atụ aro nke ukwuu ileta ya.
Ọzọkwa na ndịda France bụ Osimiri Verdon, nke nwere mgbidi 700 mita n'ịdị elu nke na-adaba n'ime osimiri. Ime a ụbọchị njem ọ mara oke mma. The Canon o nwere kilomita iri atọ na ise osimiri ahụ nwekwara mmiri turquoise. Ihe ịtụnanya nke 'achọpụtara' naanị na narị afọ nke XNUMX. Akwụsịla ịga!
Arles Ọ bụ akara aka ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị Ndị Rom mkpọmkpọ ebe, enwere forum, amphitheater na ihe nkiri site na mgbe ahu. E nwekwara ụlọ ndị dị na narị afọ nke XNUMX na n'ezie, ihe nketa nke ndị na-ese ihe Van Gough na Gauguin. Arles dịkwa na mpaghara mara mma, Camargue, nke a ma ama maka ịnyịnya ọcha, flamingos na ala mmiri.
Seillans bụ obodo mara mma na ọdịda anyanwụ Cannes, n'elu ugwu ma ga-abụ otu n'ime obodo kachasị mma na ndịda France. Nwee a etiti etiti etiti iji ụkwụ na-enyocha ya n'ihi na okporo ụzọ ya dị warara ma juputara n'obere oghere. O nwere nnukwu ụlọ, ụlọ ekpere na ọtụtụ ọmarịcha ụlọ. Amen to ubi-vine na ubi oliv…
Marseille bụ obodo nke abụọ kacha na France na nke kachasị na French Provence. Ọ nwere ike ịdị ize ndụ, dị ka nnukwu obodo ọ bụla, ọ nwekwara ike ịma mma. E nwere ngwakọta nke omenala na agbata obi na gastronomies, e nwere ụlọ ahịa, e nwere ọtụtụ na-ejegharị gburugburu nakwa, Marseille bụ mgbe a mma tinyekwa ndị fọdụrụ n'ógbè ahụ.
L'Isle sur Sorgue bụ obodo ọzọ mara mma nke dị n'akụkụ osimiri Sorgue. Na mbụ, ọ bụ obodo ịkụ azụ̀ dị na a obere agwaetiti dị n'etiti apiti. Ndị bi na ya ka na-agba mbọ ịkụ azụ na igwe mmanụ na ntụ ọka, na mgbakwunye na ịbụ ebe a na-emepụta silk, akwụkwọ, ajị anụ na akwa. Enwere ọwa mmiri niile na-agafe obodo ahụ ma mara mma nke ukwuu.
Roussillon nọ n'elu ugwu Ọ bụ otu n'ime obodo kacha mma na mpaghara ahụ.. Ọ bụ ebe na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị njem nlegharị anya n'ihi na echiche ya dị oke mma yana ụlọ ya mara mma ka mma. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-aga, ọ ka mma ịga na ọdịda anyanwụ, nke bụ mgbe ụzarị anyanwụ na-atụba ihe niile n'ime otu puku onyinyo na mgbidi nke ụlọ.
Roussillon dị nso na Avignon. O nwere ihe karịrị 1300 bi, na echiche nke Luberon National Park ha dị egwu. Kpọmkwem Avignon bụ ebe ọzọ enwere ike ịga na ndịda France, n'akụkụ osimiri Rhone, mbụ na nkenke oche nke Vatican. Taa a na-ahụ isiakwụkwọ akụkọ ihe mere eme na nnukwu obí gothic, nke kasị ukwuu na Europe, bụ́bu ebe obibi ndị popu na narị afọ nke XNUMX.
Na nso Nimes, obodo ọzọ nwere ihe nketa Rome, n'aka nke ya bụ Pont du Gard, saịtị ochie aqueduct Rome (enwere ebe ihe nketa UNESCO anọ na mpaghara France a). Obodo ọzọ mara mma bụ Uzes, nke nwere okporo ụzọ ya dị warara na obere ụlọ ahịa ya. nnukwu square ya nwere isi iyi na ọtụtụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ. Na Satọde, e nwere ahịa mara mma ma maka ụmụntakịrị enwere ya Haribo Sweets Museum, ụdị nke Willy Wonka si Chocolate Factory ma French.
N'ikpeazụ, na ndịda France ị nwere ike izute Aigues Mortes, obodo nwere mgbidi mgbe ochie super romantic, tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX site n'aka Louis IX. Kedu ihe m ga-agwa gị? Oge okpomọkụ na-abịa, ụbọchị anwụ na-acha, nnwere onwe iji nwayọọ mee njem ọzọ ... ndịda France na-echere gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Francia » Ihe ị ga-ahụ na ndịda France